Tacsi ku socota guud ahaan Reer PL
22 Nov 22, 2010 - 8:26:10 AM
Australian-Puntland Diaspora waxay tacsi u dirayaan ummadda reer Puntland meel ay joogaanba geerida ku timid labada isim Suldaan Ciise Xassan Cumar oo ku geeriyooday magaalada Boosaaso iyo Suldaan Xassan Cali Baale oo ku geeriyooday magaalada Wardheer.
Jaalliyadu waxay si gaara ugu dirayaan tacsi eheladii ay ka geeriyoodeen labada Issim waxayna u rajeynayaan labada marxuum inuu janadaii ka waraabiyo. Jaalliyada reer Puntland ee Australia waxay si gaara uga xun yihiin xaalka uu ku dhintay Suldaan Ciise Xassan Cumar oo la dilay isaga oo ka soo baxay masaajid, isla markaana ka tirsanaa dadka dhaqan ahaan mudan in la nabadgeliyo lana ixtiraamo xataa haddii lagu jiro xilli colaadeed. Waxaa nasiib daro ah in sabab la’aan lagu dilo nin isim ah waana mid ka fog garashada aadamiga . Arrintaani waxay ka soo horjeedaa dhaqanka, anshaxa iyo akhlaaqda ummada Somaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntland.
Waxaan uga baaqaynaa Dawlada Puntland iyo shicibka reer Puntland labadaba inay ilaashadaan amaankooda kana feejignaadaan cid kasta oo nabadooda khatar gelinaysa talaaba cadna ka qaadaan cid kasta oo dembi noocaas oo kale ah lagu
Guddoomiyaha Australian-Puntland Diaspora
Omar Mohamud Dhollawaa
Vacancy Anouncment Legal Advisor for the Puntland House of Representatives
Announcement notice Legal Advisor NDI Somalia Legal Aid Clinic of Faculty of Law, Puntland State University (PSU)